Etu esi eto Onyi Hydroponic - Olee-Tos
Etu esi eto Onwa Hydroponic
Enwere m mmasị na-eto eto mgbọrọgwụ hydroponically, ma ọ dịghị mgbe m na-amaba. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike itolite na sistemụ hydroponic, mana enweghị ọtụtụ ozi ebe ahụ maka etu esi esi eto yabasị, karọt, radishes, ma ọ bụ mkpụrụ osisi mgbọrọgwụ ọ bụla ọzọ. Nke a bụ ihe mere m ji bido Nnukwu Nnukwu Onion! Gụọ na lelee Mbido ahụ.
Efere dị ọcha
Na-eto eto ọkara
Achọpụtara m ụfọdụ osisi yabasị na-acha ọbara ọbara site na ebe m na-edebe ụlọ. Ihe ndị ọzọ m nwere site na ndị ọzọ na-etolite, mana ị nwere ike isi na ya nweta ọtụtụ n'ime ya site na Depot Home na mpaghara mmiri gị ma ọ bụ ụlọ ahịa ugbo. I nwekwara ike ịkwalite ma jiri aka gị rụọ ọrụ - enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche isi mee ya!
Ekpebiri m iso Omenala Mmiri Omi n'ihi na nke a nnwale Mbido ruru ka ndị pụrụ iche na-eto eto chọrọ nke eyịm. Enwere m ịhụnanya na usoro DWC. Ọ bụ usoro dị mfe iji mụta ma na-amịpụta ụfọdụ owuwe ihe ubi siri ike m hụtụrụla.
Na nhazi m enwere ite isii dị 3 'jupụtara na njedebe na perlite. M etinye eyịm na ọkara na perlite ma tinyezie ụgbụ m niile n'ime tray na-eto eto. Naanị ihe ga-eme bụ ijupụta ya na mmiri wee tụba na okwute ikuku.
Ọ bụrụ na ị ga-eme ụdị nnwale a nke hydroponic, hụ na ị kụrụ bọlbụ niile na gburugburu otu ịdị elu. Zọ a, ị nwere ike wunye naanị mmiri kwesịrị ekwesị ka mgbọrọgwụ ya na-adị mgbe niile, mana bulbs anaghị emetụ mmiri ahụ. Amaghị m na ọ ga-adị njọ, mana achọghị m itinye ihe ọ bụla mebiri ma ọ bụ mebie site na ịnwe bulbs na mmiri.
Ekwughị m na vidiyo ahụ na enweghị m nri na mmiri m maka izu mbụ. Agụrụ m banyere aghụghọ a ụbọchị ole na ole gara aga. Echiche zuru ezu bụ na site na agụụ gị na eyịm na mbido, ị na-amanye mgbọrọgwụ ka o too nke ọma, sistem siri ike n'ihi na ha na-anwa ịchọta nri ngwa ngwa o kwere mee. Mgbe ahụ, mgbe ị mechara tinye nri na sistemụ ahụ, yabasị gị nwere ezigbo mgbọrọgwụ siri ike iji nyere ha aka ito nnukwu!
Nkụzi eji isi mee isi site n'ikike nke
peat akpaetu ọma maka akwukwo nri ubi
akuku meyer osisi lemon n'ime ala